2015နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative စောင့်ရှောက်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏တစ်နှစ်တာ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု 02-2002-8683~ 4
မြေတပြင်လုံးအိပ်မက်မျှော်လင့် Medical Center မှလည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ကျန်းမာရေးကိုပညာရေးသင်တန်းတွေပို့ချနေသည်. ကင်ဆာရောဂါနှင့်အတူဆေးဘက် sooecheung သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများနှင့်ကလေးများအတွက်တစ်ဦးတိုးဖို့ multidisciplinary palliative စောင့်ရှောက်မှုအသင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပှား, နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative စောင့်ရှောက်ဘို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရန်အခြေခံပညာရေးကိုကိုင်ထားလိမ့်မည်.
◇နေ့စွဲ : 2015. 10. 22 ~ 2015. 12. 03 တိုင်းကြာသပတေးနေ့ 13:00~ 17:20
◇ Venue : ဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံကြီး, 11th ကြမ်းပြင်ပရိသတ်ခန်းမ
◇ပစ်မှတ် : နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative စောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍအလုပ်သမားများ. ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံနှင့်ကလေးအထူးကုနာတာရှည်ဂေ palliative စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများ. နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative အများပြည်သူဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုခငျြ
◇စည်းရုံးသူ : ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, ကြက်ခြေနီ, Hyundai မော်တော် Chung Mong-Koo ဖောင်ဒေးရှင်း
◇မှတ်ပုံတင်ကာလ : 2015. 09. 25 (ရှေ) ~ 2015. 10. 20 (အမျက်ဒေါသ)
◇မှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်နည်း : မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှနေအိမ်တွင် Dream(ကို http://www.rch.or.kr/hope/)လျှောက်လွှာတွင်,(ကို 'သတိပေးချက်' Download)50000 ₩မှတ်ပုံတင်နောက်သို့စေလွှတ်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖက်စ်အားဖြင့်စာအရေးအသား [Woori Bank 1005-102-067022 ဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံ] သို့အပ်နှံကြလိမ့် ကျေးဇူးပြု.. (သင်တန်းကိုစတင်ပြီးနောက်ပြန်အမ်းငွေအဘယ်သူမျှမ)
◇ကြေး : 25ကျနော်တို့သူတို့အဘို့အသစ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ပြီးစီးခဲ့နာရီ.
◇တင်ပြချက်များနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ : လျ. 02-2002-8683~ 4, ဖက်စ်. 02-2002-8679, E-mail ကို. shin0116jh@naver.com , brit3467@naver.com
လိပ်စာ. (110-747) Jongno-Gu, ဆိုးလ် saemunan9တတိယအထပ်အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့် Medical Center မှအပေါ်ဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံ
နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative စောင့်ရှောက်၏အကျဉ်းချုပ်
ဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံ / ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှ။
နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative စောင့်ရှောက်ရပ်ကွက်များအတွက်အထက်လွှတ်တော်အမတ် mohyeon စင်တာ
Lee က, Kyung - Shik;
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် palliative စောင့်ရှောက်မှု၏ခွငျထောငျ
logo ကုထုံး, Group မှဆွေးနွေးချက်များ(30မိနစ်)
Kim က, Mee - ထွက်
ကိုရီးယား Institute မှအမှတ်တံဆိပ်ကုထုံး
Lee က, Young က - Sook က
ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှလူမှုလုပ်ငန်းခွင် ROOM တွင်
ဆမ်က G ဘက်စုံကုသမှုကင်ဆာဆေးရုံပေါင်းစည်းပညာရေးလေ့ကျင့်ရေး
ခြင်း simulation လေ့ကျင့်ခန်း
ရောဂါကူးစက်စီမံခန့်ခွဲမှု(Handwashing, အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်, ချောင်းဆိုးလောကဝတ်)
တွင် Dream မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှအလေ့အကျင့်
တွင် Dream မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှစေတနာ့ဝန်ထမ်း
အသုဘမြေပုံ euljidae ဦးစီးဌာန
အုပ်ချုပ်ရေးအခန်းကဏ္ဍနှင့်သဘောထားကို / နာတာရှည်ဂေဟာစေတနာ့ဝန်ထမ်း exhausting နာတာရှည်ဂေဟာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနာတာရှည်ဂေဟာအဖွဲ့အတှေ့အကွုံကိုဝေမျှခြင်း
29 နာရီစုစုပေါင်း(အလေ့အကျင့်များ မှလွဲ.)
နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့် Palliative စောင့်ရှောက်အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းလျှောက်လွှာ(2015).tuck
မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှဒုတိယနှစ်ပတ်လည်, 2nd ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုကုသမှုဖျော်ဖြေပွဲ '' ထား